Wararka Suuqa Maanta: Heshiiska Cusub ee Mo Salah Doonayo, Xiisaha Frenkie de Jong ee City Iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Heshiiska Cusub ee Mo Salah Doonayo, Xiisaha Frenkie de...
Wararka Suuqa Maanta: Heshiiska Cusub ee Mo Salah Doonayo, Xiisaha Frenkie de Jong ee City Iyo Qodobo kale
Weeraryahanka Liverpool iyo Masar Mohamed Salah, oo 29 jir ah, ayaa doonaya qandaraas uu ku qaadanayo 500,000 oo ginni isbuucii si uu ugu sii joogo Reds. (Footballinsider247)
Ole Gunnar Solskjaer ayaa u halgamaya sidii uu u badbaadin lahaa shaqadiisa tababaranimo ee Manchester United, 48 jirkan reer Norway ayaa mar hore lumiyay kalsoonida qeyb ka mid ah kooxdiisa, xitaa ka hor guuldaradii 5-0 ee Axadii ka soo gaartay Liverpool. (ESPN)
Madaxda Manchester United ayaa si weyn uga fiirsanaya inay cayriyaan Solskjaer ka hor kulankooda xiga ee Tottenham sabtida. (Manchester Evening News)
Tababaraha reer France ee Zinedine Zidane ayaan jeclayn shaqada sare ee Old Trafford inkasta oo uu shaqo la’aan yahay kadib markii uu ka tagay Real Madrid bishii May. 49-sano jirkaan ayaa hiigsigiisu yahay inuu maamulo midkood Paris St-Germain ama xulka qaranka France, laakiin midkoodna boos lama heli karo. (Mundo Deportivo)
Si kasta oo ay ahaataba cidda masuulka ka ah Manchester United xilli ciyaareedka soo socda, kooxda ayaa la filayaa inay lasoo wareegto xiddiga khadka dhexe ee Inter Milan iyo Italy Nicolo Barella, 24, Juventus 24 jirka Italy Federico Chiesa, iyo daafaca Atletico Madrid ee England Kieran Trippier, 31. (Fichajes)
Manchester City iyo Bayern Munich ayaa labaduba xiiseynaya inay la soo wareegto Barcelona ee 24-sano jirka qadka dhexe Netherlands Frenkie de Jong. (Calciomercato )
Newcastle United ayaa dejisay qorshaheeda ku aadan saxiixa khadka dhexe ee Aston Villa iyo Zimbabwe Marvelous Nakamba, oo 27 jir ah bisha Janaayo. (FootballInsider)
Daaficii hore ee Newcastle iyo England Ryan Taylor, oo 37 jir ah, ayaa sheegay in Magpies ay tahay inay la xiriiraan tababaraha Rangers Steven Gerrard, oo 41 jir ah, wax ku saabsan jagada tababarenimo ee ka banaan St James’ Park. (Sky Sports)
Daafaca reer England ee Chelsea Trevoh Chalobah, oo 22 jir ah, ayaa ku dhow inuu ogolaado qandaraas cusub oo waqti dheer ah ka dib markii uu ka mid noqday kooxda koowaad xilli ciyaareedkan. (Football.london)
Tababaraha reer Holland ee Barcelona Ronald Koeman, oo 58 jir ah, ayaa booskiisa heli doona haddii ay kooxdiisu ku guul darreysato inay badiso dhammaan saddexda kulan ee soo aaddan. (Marca)
Newcastle United ayaa tartan kala kulmeysa Juventus isku daygooda ay ku doonayaan in weeraryahanka France Ousmane Dembele ay uga soo kaxeeyaan Barcelona ka dib markii 24 jirkaan wakiilkiisa uu la xiriiray labada kooxood wax macquul ah. (Sport)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Netherlands Donny van de Beek ayaa go’aansaday inuu bedelo wakiilkiisa isagoo doonaya inuu ka tago Manchester United jiilaalka, Everton, Newcastle iyo Juventus ayaa xiiseynaya 24 jirkaan. (Metro)
Wadahadaladii qandaraaska ee Chelsea ay kula jirtay 25 jirka reer Denmark Andreas Christensen ayaa hakad galay iyadoo ay jirto xiriir la’aan labo bilood ah oo u dhaxeysay labada dhinac oo ku saabsan heshiis cusub. (Goal)
Agaasimaha akadeemiyadda Manchester City Jason Wilcox ayaa wadahadalo dheeri ah la yeelan doona Newcastle United si uu ula wareego doorka cusub ee agaasimaha kubada cagta ee St James Park. Wadahadalka uu la yeeshay ciyaaryahankii hore ee Blackburn iyo garabka England ayaa yimid ka dib markii Magpies ay la hadashay weeraryahankii hore ee Arsenal Marc Overmars, kaasoo agaasime farsamo ka ah Ajax. (DailyStar)
Tottenham, Aston Villa iyo Everton ayaa xiiseynaya saxiixa daafaca Stoke City iyo Australia Harry Souttar, oo 23 jir ah (Footballinsider247).
Previous articleWeerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Afgooye
Next articleMagacaabista Zinedine Zidane Ama Conte, Shaqo Badbaadinta Ole Gunnar Solskjaer iyo Halista ku Wajahan Cristiano Ronaldo
Wararkii ugu dambeeyey ee qarax ka dhacay xero ku taalla GEDO...
Christian Pulisic oo ku soo laabtay tababarka kooxda Chelsea
Tottenham Hotspur oo qarka u saaran inay ceyriso Nuno Espirito Santo